“Waxaan dadka uga sheekeeyaa sababta laba jeer la ii furay!!” – Sacdiyo Axmed | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka “Waxaan dadka uga sheekeeyaa sababta laba jeer la ii furay!!” – Sacdiyo...
“Waxaan dadka uga sheekeeyaa sababta laba jeer la ii furay!!” – Sacdiyo Axmed
(Hadalsame) 16 Dis 2021 – Sacdiyo Axmed Rashiid waa haweeney ku dhiirata inay ka hadasho arrimo xasaasi ah, gaar ahaan sababaha ay u fashilmeen guurkeedii koowaad iyo labaad.
“Habeen ayaan isku dhacnay, kadib waxaan ugu hanjabay in aan toori nafta uga jarayo. Waxaan isku soo xiray qol gaar ah oo aan habeenkaas seexday. Markii waaga uu baryay ayaa ehelka labada dhinac isu yimaadeen, waxaana u sheegay arrintii dhacday, kadibna sidaa ayaa la iiga furay ninkii labaad,” ayay tiri.
Previous articleSiyaasi farta ku fiiqay arrin ay dad badani ka ilduufsan yihiin balse muhim ah
Next articleSheeko aad u XIKMAD badan oo dhex martay mallaay dabato Mexican ah & dalxiise Maraykan ah